बागी उम्मेदवारको रहस्यमय मृत्यु- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
बागी उम्मेदवारको रहस्यमय मृत्यु
वैशाख २६, २०७९ प्रदीप मेन्याङ्बो, सुम्निमा चाम्लिङ
सुनसरी — नेपाली कांग्रेसले वडाध्यक्ष पदका लागि टिकट नदिएपछि सुनसरीको रामधुनी–८ बाट वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ६५ वर्षीय गणेश पौडेल शनिबार झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् ।
रामधुनीको डुम्राहास्थित पौडेलचोकका पौडेल गत चुनावमा र यसपालि पनि टिकट नपाएपछि बागी बनेका थिए । चार दिनअघि मात्र घरबाट बेपत्ता भएका थिए । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने, ‘मोबाइल घरमा, मोटरसाइकल इनरुवामा छाडेर बेपत्ता भएपछि उजुरीका आधारमा खोजी हुँदा भोलिपल्ट सम्पर्कमा आएका थिए ।’
सम्पर्कमा आएका पौडेलले साथीको घरमा बसेको बताएका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै बोलाएको भोलीपल्ट शनिबार शव घर पछाडीको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो । शवसँगै प्रहरीले ‘सुसाइड नोट’ पनि बरामद गरेको प्रजिअ यादवले बताए । स्थानीय तहको चुनाव र आफ्नै पार्टीभित्रको विवादबीच पौडेलको मानसिक सन्तुलनमा केही गडबडी उत्पन्न भएकाले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । तर उनले मितिसहितको हस्ताक्षर गरेको सुसाइड नोट आफैंले लेखेको हो वा दबाबमा परेर लेखेको बारे भने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीले फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो । तर पौडेलले फिर्ता नलिएपछि कांग्रेसले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । पोस्टमार्टमका लागि उनको शव धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको छ ।
विवादरहित उनी सरल र मिजासिलो व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे । सामाजिक क्षेत्रमा समेत उतिकै सक्रिय थिए । २०४१ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट नेवि संघमा आबद्ध भई विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए । यसपल्टसमेत वडाध्यक्षका लागि उनको नाम कमिटीले सिफारिस गरिएको थियो । स्थानीयका अनुसार राम्रो छवि भएका कारण चुनावी माहोलसमेत राम्रो थियो । प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका थिए । घटना रहस्यमय भएको स्थानीयले बताएका छन् । पौडेलका आमाबुबा, दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
मृतकका साहिला भाइ सन्तोष पौडेलले भने, ‘दाजु दबाब नझेल्ने मान्छे पनि होइन तर बीचमा कसैले धम्की पो दियो कि ? आत्महत्या जस्तो देखिएको छ, तर यो नहुन पनि सक्छ ।’ चुनावी चहलपहल सुरु भएदेखि उनलाई दबाब दिँदै आएको परिवारजन बताउँछन् । प्रचारमा नलागी मौन बस्न उनलाई चर्को दबाब दिइएको सन्तोषले बताए ।
उनी सम्पर्कविहीन भएपछि परिवारजन जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले लिन नमानेको सन्तोषले बताए । भन्छन्, ‘चुनाव चिह्न पाउनुअघिसम्म पनि फिर्ता गर्नु भनेर भनेका वडाका कार्यकर्तामाथि जाहेरी दिन खोजेका थियौं तर प्रहरीले दिन मिल्दैन भन्यो ।’ जाहेरी लिन नमानेपछि खोजी गरिदिन भनेर निवेदन दिएका थियौं । सम्पर्कमा आएका पौडेललाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालय लगेर छाडिएको थियो । शुक्रबार अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बोलाएपछि सन्तोष दाईसँगै पुगेका थिए । घर फर्केका उनलाई सुनसरी प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नरेन्द्रकुमार कार्कीले पुनः बोलाए पछि पौडेल र सन्तोष प्रहरी कार्यालय पुगे ।
‘किन बोलाउनुभएको रहेछ भनेर सोध्दा दाजुले केही पनि खुलाउनु भएन,’ उनले भने । सुनसरी प्रहरी कार्यालयका डीएसपी कार्कीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनी सरल स्वभावको व्यक्ति रहेको पाएँ । उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै केही थियो कि ? घरपरिवारलाई थाहा होला ।’ विदेशमा रहेका छोरा आएपछि मात्र पोस्टमार्टम गर्ने परिवारजनले भनेको हुनाले शव धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको सुनसरीको प्रहरी प्रमुख सञ्जयसिंह थापाले बताए । एक/दुई दिनभित्रमा छोरा आउने परिवारजनले जानकारी दिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:३९
थारू संग्रहालयमा अवलोकनकर्ता बढे
संग्रहालयभित्र जन्मदेखि मृत्युसम्मका गतिविधि, गाउँको झल्को दिने परम्परागत घर, देउताघर, इनार, माछापोखरी, थारू संस्कृति र संस्कारलाई झल्काउने सामग्री राखिएका छन्
पुस १, २०७८ प्रदीप मेन्याङ्बो, सुम्निमा चाम्लिङ
सुनसरी — पूर्वका थारू चौधरीका इतिहास, कला, संस्कृति र जीवनशैलीलाई नजिकबाट बुझ्न चाहनेहरू सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–२ स्थित शिवनगर बस्तीको थारू संग्रहालय पुग्छन् । यहाँ प्रायः भीडभाड भइरहन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायमध्ये पूर्वका थारू, चौधरी समुदायले आफ्नो जीवनशैली झल्काउन संग्रहालय तयार पारेका हुन् ।
संग्रहालय भवन निर्माण र पुराना सामग्री जुटाउन सक्रिय शिवनगर माविका पूर्वप्रधानाध्यापक फागुलाल चौधरीका अनुसार करिब ४ सय वर्षदेखि बसोबास रहेको स्थानमा संग्रहालय निर्माण गरिएको हो । रामधुनी नगरपालिकामा ६० प्रतिशत थारू जातिको बसोबास छ । उनले भने, ‘थारू चौधरीका आधुनिक पुस्ताले पुर्खाहरू कस्ता थिए, तत्कालीन जीवनशैली कस्तो थियो, रहनसहन खानपान, कला सांस्कृतिक, भाषा कस्तो थियो भनेर अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा यो संग्रहालय स्थापना गरिएको हो ।’
आधुनिकताको प्रभावले मौलिकता लोप हुँदै गएकाले संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि यसको निर्माण गरिएको संग्रहालयका अध्यक्ष फागुलाल चौधरीले बताए । ‘थारू जातिको गरगहना, भाषा, पहिरन, विवाह विधि लोप हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई थाहा दिन संग्रहालय बनाउनुपर्छ भनेर सुरु गरेका छौँ ।’ उनले नयाँ पुस्तालाई पुर्खाको जीवनशैली देखाउन संग्रहालय बनाउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘पुराना जीवनशैलीको केही अंशबाहेक सबै मेटिन थालेपछि संग्रहालय निर्माणमा जुटेर यतिसम्म गरेका छौं ।’
निर्माण र पुराना सामग्री संकलनमा थारू समुदायका शिक्षक, कर्मचारी, चित्रकार, मूर्तिकार, राजनीतिकर्मी, स्थानीयलगायतको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । चौधरीका अनुसार शिवनगरमा तीन वर्षअघि आदिवासी जनजाति संग्रहालय निर्माण सुरु भएको थियो । समाजलाई नजिकबाट चिन्न र विद्यार्थीलाई समेत सिकाउनका लागि फागुलालले आदिवासी जनजाति (थारू) हरूको संगहालय बनाउने योजना अघि सार्दा स्थानीयले समेत सहयोग गरे ।
सुरुमा आदिवासी संग्रहालय बनाउने योजना भए पनि अहिले भने उक्त स्थान थारू चौधरी समुदायको ऐतिहासिक स्थल भएकाले थारू जातिको मात्र संग्रहालय स्थापना गरिएको हो । संग्रहालयभित्र जन्मदेखि मृत्युसम्मका गतिविधि, गाउँको झल्को दिने परम्परागत घर, देउताघर, इनार, माछापोखरी, थारू समुदायका संस्कृति र संस्कारलाई झल्काउने सामग्री राखिएका छन् । कतिपय सामग्री अर्पाप्य भएकाले इतिहासका अधारमा त्यसलाई भित्तेतस्बिर र चित्रकलामार्फत दर्साइएको छ ।
संग्रहालयमा थारू समुदायले कृषि र यातायातको रूपमा प्रयोग गरेका ६० वर्ष पुरानो गोरुगाडा, सन्दुक (बाकस), माटाका पुराना परम्परागत भाँडाकुँडा, चुलो, जमिन जोत्न र खन्न प्रयोग हुने औजारहरू र ढकियालगायतका परम्परागत वस्तु राखिएका छन् । मुसहर, सरदार र चौधरी जातिले पुज्ने भगवान्को प्रतिमासमेत राखिएको छ । संग्रहालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँ, रामधुनी नगरपालिकाले ७ लाख रुपैयाँ र जनस्तरबाट ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । संग्रहालयमा चित्र स्थानीय चित्रकार हरिशंकर चौधरीले र मूर्तिहरू सुरेशकुमार चौधरीले बनाएका हुन् ।
थारू समुदायका नयाँ पुस्तालाई संस्कृति र जीवनशैली बुझ्न सघाउ पुग्ने आदिवासी जनजाति महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष रामकुमार माण्डुपाले बताए । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष धीरेन्द्र चौधरी संस्कृति र संस्कारले मानवीय मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने भएकाले संग्रहालयको महत्त्व नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने बताए । नजिकै वडा समितिको संरक्षणमा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा पनि संग्रहालयलाई भोगचलन गर्न दिने सहमति भएको छ । त्यहाँ पूर्वका थारू समुदायको मौलिक खानपान र संस्कृति झल्काउने होमस्टे निर्माणका लागि पनि पहल सुरु भएको छ । फागुलालका अनुसार स्थानीय थारू समुदाय मौलिकता झल्कने अन्य संरचना निर्माणमा जुट्ने तयारीमा छन् ।
थारू समुदायको खानपान, रहनसहन, भेषभूषा र सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर एक गैरसरकारी संस्थाले होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिररहेका छन् । संग्रहालय निर्माणले बाह्य र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको स्थानीय चित्रकार हरिशंकर चौधरी बताए ।
प्रकाशित : पुस १, २०७८ १०:०९